नायिका सोनाक्षी सिन्हा पक्राउ(भिडियो सहित)
एजेन्सी, बलिउड नायिका सोनाक्षी सिन्हाको एउटा भिडियो सोसल मिडियामा भाइरल भइरहेको छ जसमा उनको हातमा हत्कडी लगाइरहेको देख्न सकिन्छ । भिडियोमा सोनाक्षीले आफूलाई यसरी पक्राउ गर्न नमिल्ने र आफूले केही गल्ती नगरेका कारण निर्दोष छु भनेर कराइरहेको सुन्न सकिन्छ । सोनाक्षीले भिडियोमा भनेकी छिन्, ‘तपाईले मलाई यसरी पक्राउ गर्न सक्नुहुन्नँ । तपाईलाई थाहा छ म […]
बलिउडकी अभिनेत्री राखी सावन्तले गरिन् गोप्य विवाह
एजेन्सी । राखी सावन्तले अन्ततः आफूले विवाह गरेको स्विकारेकी छिन् । बलिउडकी आइटम गर्ल भनेर चिनिने सावन्तले यस अघि ४० वर्षे कन्ट्रोभर्सी क्विनले आफ्नो विवाह अस्पिकार गरेकी थिइन् । सावन्तका अनुसार उनका श्रीमानको नाम रितेश हो । उनी युरोपमा बस्छन् । विवाहपछि उनी पुनः विदेश गइसकेको राखीले बताएकी छिन् । स्पटबोयलाई दिएको अन्तर्वार्तामा राखीले आफू […]
बलिउड अभिनेत्री आलिया सगरमाथामा
अरुणिमा सिंहमाथि बन्न लागेको बायोपिक फिल्ममा अभिनय गर्न बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्ट सगरमाथा क्षेत्र पुग्ने भएकी छन् । फिल्मको छायांकन सगरमाथा आधार शिविरमा हुने छ । फिल्म सिंहमाथि लेखिएको पुस्तक ‘बर्न अगेन अन द माउन्टेन’ माथि बन्न लागेको हो । सन् २०२० मा फिल्म युनिट छायांकनका लागि सगरमाथा क्षेत्रमा आउने बताइएको छ । धर्मा प्रोडक्सन […]
हट नायिका प्रियंका चोपडाको हट तस्विरहरु
एजेन्सी, प्रियंका चोपड़ा बलिउडमा मात्र नभई हलिउडमा पनि काम गरीसकेकी छिन । सुन्दर तथा हट नायिका चोपड़ाले बलिउडमा धेरै सुपरहिट चलचित्रहरु पनि दिसकेका छन । अमेरिकन गायक निक जोनससँग विवाह गरेपछी उनी हाल अमेरिकामा नै बासोबास गर्छिन ।
बलिउडकी नायिका समा शिकंदरको यस्तो हट अवतार
एजेन्सी । बलिउडकी नायिका समा शिकंदर बलिउडकी चर्चित नायिका समेत हुन् । भारतिय टिभी सिरियल ‘ये मेरी लाइफ है’बाट चर्चामा आएकी उनले बालवीरमा परीको भूमिका निवार्ह गरेकी थिइन् । यतिबेला नायिका शिकंदरको हट अवतार सार्वजनिक भएको छ ।
विश्वकै सुन्दर अभिनेत्रीकी बोल्ड तस्विरले हंगामा
एजेन्सी । अमेरिकी अभिनेत्री एरियल विन्टरकी तस्विरले फेरी हङगामा मच्चाएको छ । विश्वमै सुन्दर अभिनेत्रीका रुपमा चर्चा पाइरहेकी २० वर्षीय एरियलले सार्वजनिक गरेका केही तस्विर अहिले समाजिक सञ्जालमा हट केक बनेर छाइरहेका छन । केहि सयम पहिले एरियलले बेष्ट अफ कमिकबुकका लागी खिचिएका तस्विर एका एक समाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका हुन ।
मोडल जेसिकाको हट तस्बिरहरु
एजेन्सी । अष्ट्रेलियाकी मोडल जेसिका गोमेजको विकनीसहित हट फोटो भइरल भएका छन् । जेसिका संसारको सबैभन्दा आकर्षक महिला मध्येकी एक नम्बरमा आउने गरेकी छन् । उनले सन् २०१२, २०१३ र २०१४ मा ‘वर्ल्ड मोस्ट डिजाइरेबल वुमन’ को उपाधि हात पारेकी छिन् । जेसिका एसआई स्विमस्विट मोडल पनि हुन् ।
किन लगाए पाकिस्तानमा भारतीय फिल्ममाथि प्रतिबन्ध ?
एजेन्सी, २४ साउन । सूचना तथा प्रसारणका लागि प्रधानमन्त्रीका विशेष सहायक डा. फिरदोस आशिक अवानले विज्ञप्ति जारी गर्दै पाकिस्तानले भारतीय फिल्ममाथि प्रतिवन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ । जम्मु कश्मीर राज्यलाई विशेष दर्जा दिने भारतको संविधानको धारा ३७० भारत सरकराले सोमबार खारेज गरेपछि पाकिस्तानले भारतसँग राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध कम गर्नको लागि कदम चालिसकेको छ । […]
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको मेकअप खर्च ८० लाख ? यस्तो छ वास्तविकता
एजेन्सी । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लिएर भारतमा एउटा मिडियो निकै भाईरल भईरहेका छन् । जुन भिडियोमा दाबी गरिएको छ की मोदीले आफनो मेकअपका लागि हरेक महिना ८० लाख भारु खर्च गर्ने गर्छन् । करिब ४५ सेकेन्डको उक्त भिडियोमा केही व्युटीशियन र स्टाइलिस्टहरु मोदीको वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ । उक्त भिडियो कांग्रेसले समेत खुबै सेयर गरेको […]
यी नायिकाले सुत्केरी भएको ११ दिनपछि देखाइन् स्लिम बडी
एजेन्सी । बलिउड नायक अर्जुन रामपाल र उनकी प्रेमिका गेब्रिएला बुवा–आमा बनेको ११ दिनपछि गेब्रिएलाले व्यायामपछि ऐनामा खिचिएको आफ्नो सेल्फी सोसल मिडियामा सेयर गरे । १८ जुलाईमा बुवा–आमा बनेका उनीहरुले आफ्ना छोरा अरिक रामपालको फोटो सोसल मिडियामा सेयर गरिन् । उनको फिट बडी देखेर उनी केही दिन अघिमात्रै आमा बनेको भनेर विश्वास गर्न मुश्लिक पर्छ […]
बलिउडका नायक गोबिन्दाले ४९ वर्षमा किन गरे ‘दोस्रो विवाह’
एजेन्सी । बलिउड फिल्ममा आफ्नो अभिनयले भिन्न छाप छोडेका नायक हुन् गोबिन्दा । गोबिन्दा हालै भारतीय टिभी शो आपकी अदालतमा पुगे जहाँ उनले आफ्नो विवाहबारे रोचक खुलासा गरे । केही वर्ष अघि गोबिन्दा त्यतिबेला चर्चामा आएका थिए जब उनले आफ्नी श्रीमती सुनितासँग एकपटक पुनः विवाह गरेका थिए । कार्यक्रममा गोबिन्दाले श्रीमतीसँग दोस्रो विवाह गर्नुको कारण […]
आयुस्मानसँग बलिउडमा डेब्यु गर्दै कट्रिनाकी बहिनी
एजेन्सी । सलमान खानका ज्वाइँ आयुस्मान शर्मासँग अभिनेत्री कट्रिना कैफकी बहिनी इसाबेलले बलिउडमा डेब्यु गर्ने भएकी छिन् । करन ललित बुटानीले निर्देशन गर्ने भनिएको चलचित्रको छायाँकन सेप्टेम्बरबाट शुरु हुने बताइएको छ । ट्रेड अनालिस्ट तरन आर्दशले ट्वीट गर्दै यस विषयको जानकारी दिए । चलचित्र सन् २०२० मा रिलिज गरिने बताइएको छ ।
अभिनेत्री मुखीले श्रीमानमाथि लगाएकी थिइन् अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध बनाउने गरेको आरोप
एजेन्सी । विश्व सुन्दरीसमेत भइसकेकी युक्ता मुखीले आफ्ना श्रीमान प्रिन्स टुलीमाथि विभिन्न गम्भीर आरोप लगाएकी थिइन् । श्रीमानले आफूमाथि अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध बनाउने गरेको युक्ताले आरोप लगाएकी थिइन् । पुलिसले दिएको जानकारी अनुसार अभिनेत्रीले आफ्ना श्रीमानमाथि दाइजो उत्पीडन, कुटपिट र अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध स्थापित गर्ने गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । उनको अरोपलाई उनका श्रीमानले खण्डन […]
बलिउड अभिनेत्री सारा अली खानको प्रेम चर्चा
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री सारा अली खानले डेटिङ जान पाए आर्यनसँग जाने थिएँ भनेर एउटा सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिएसँगै दिल्लीमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय फेसन सोमा अतिथि तथ सहयोगीका रूपमा हालै अभिनेता कार्तिक आर्यनलाई लगेकी हुन् । फेसन सोमा कपडा परिवर्तन गर्नेदेखि उनको हेरचाहमा समेत अभिनेता कार्तिकले साथ दिए । सोही कारण कार्तिक र साराको नाम जोडेर […]
यी हुन् महिलाहरुको स्तन समातेर भविष्य हेर्ने ज्योतिष
एजेन्सी । ज्योतिषहरुको पनि आ–आफ्नै हात हेर्ने तरिका रहेको पाइन्छ । हालै हाम्रो देशको छिमेकी मुलुक चीनका एक ज्योतिषीको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उनी महिलाहरुको स्तन मुसारेर जन्म कुण्डली हेर्ने गर्छन् ।उनको जन्म कुण्डली हेर्ने यस्तो तरिकाले दुनियाँलाई नै चकित पारेको छ । यी ज्योतिषीले युवतीहरुको स्तनमा हात राखेर उनीहरुको भविष्य बताउने गर्छन् । […]
अमेरिकामा गएर पोर्न फिल्म खेलेर जमेका नेपाली युवतीहरु
कतिपय पश्चिमा देशहरुमा यौन व्यवसाय कानुनी मान्यता प्राप्त छ । नेपालमा भने यौन व्यवसाय कानुन विपरितको क्रियाकलाप मानिन्छ । तर नेपालका युवतीहरु विदेशमा गएर पोर्न फिल्म खेलिरहेका छन् । अमेरिकामा गएर ब्लु फिल्म खेल्ने दुई नेपाली चर्चामै छन् । ती हुन् दिप शिखा र विन्दु परियार । दिप शिखा उनको वास्तविक नाम दिप शिखा भएपनि […]
नायिका सुष्मा कार्कीको ‘हट’ तस्बिर
नेपाली चलचित्र ‘मेरो एउटा साथी छ’ बाट आफ्नो करियरको सुरुवात गरेकी हट एण्ड ग्याल्यमरस नायिका हुन्- सुष्मा कार्की । उनले सुरुमा मोडलिङ्ग करियर रोजेकी थिइन् भने पछि उनले मोडलिङ्ग सफलता पाएपछि चलचित्र ‘मेरो एउटा साथी छ’ डेब्यु गरिन । चलचित्र ‘बिन्दास’, ‘बाउन्सर’, ‘लूट’, ‘साली कसको भेनाको’ लगायत चलचित्रमा अभिनय गरी सकेकी सुष्मालाई दर्शकले नायिका भन्दा […]
प्रधानमन्त्रीलाई पत्र – बनौ अव नेपालका असल नागरिक
गरौँ अव सहयोग असल प्रतिपक्षी बन्दै ! खनौ देशको माटो कृषिमा अपार क्रान्ति ल्याउँदै !! राजनीति देशको विकास गर्नलाई पो हो ! सत्ता प्राप्ति मात्र लक्ष्य हो कि जस्तो देखियो !! सत्ता पक्ष पनि अव सचेत हुनै पर्छ ! जनताले अनुभूत गर्ने विकास दिनु पर्छ !! माला लाउने विदेश घुम्ने शान पट्टि लाउने ! नब […]
शिल्पालाई छविको आग्रह : कमीकमजोरीहरू सच्याएर गान्धीवादी भएर बस्छु, घर फर्क
काठमाडाैं । फिल्म निर्माता छविराज ओझाले अभिनेत्री तथा श्रीमती शिल्पा पोखरेललाई घर आउन आग्रह गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत शिल्पासमक्ष यस्तो आग्रह गरेका हुन्। ५२ बर्षको उमेरमा ३ वटी श्रीमतीसँग सम्बन्ध बिच्छेदपछि जीवनका सबैकुरासँग कम्प्रमाइज गरेर शिल्पालाई बिहे गरेको प्रशंग झिक्दै छविराजले यसअघिका विवादका सम्बन्धमा आफ्ना कमजोरी सच्याएर अब गान्धीवादी बन्न तयार रहेको भन्दै […]
काठमाडौँ, २६ असार । चलचित्र निर्माता छवी ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेलले शान्ति सुरक्षामा आँच आउने गरी कुनै पनि गतिविधि नगर्ने सहमति गर्नुभएको छ । नायिक पोखरेलले श्रीमान्बाट असुरक्षा भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिनुभएकाले आज काठमाडौँस्थित महानगरीय प्रहरी परिसरमा भएको छलफलमा यस्तो सहमति भएको हो । परिसरका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले आपसी शान्ति सुरक्षामा आँच आउने […]